तालमेल हुन सक्छ, वाम एकताको सम्भावना छैनः गोकुल बास्कोटा (अन्तर्वार्ता) | Nepal Khabar
जेठ ३० , काठमाडौँ
यिनै विषयमा केन्द्रित रही एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटासँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
म एउटा वामपन्थी भएको हिसाबले के भन्छु भने वाम एकता हुनु राम्रो छ। कागजमा वामपन्थीहरु बढ्ता छन् नेपालमा। दल पनि धेरै छन् होला। कांग्रेस दल त एउटै छ– नेपाली कांग्रेस। तर, वामपन्थी त नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, अर्को नेकपा, समाजवादी। यस्तै उस्तै। यिनीहरुको झण्डा हँसिया–हथौडा। यो एउटा भ्रमपूर्ण ट्रेडमार्क भयो। यहाँ इमान्दारी छैन। वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको भिन्नता पनि केही देखिएको छैन।
घनश्याम भुसालमाथि गोकुल बास्कोटाको टिप्पणी : सही पार्टीमा लाग्नुपर्यो क्या (भिडियोसहित)
वामपन्थी भन्नेलाई मेरो प्रश्न छ– वर्ग संघर्ष चुनावभित्र हुन्छ कि हुँदैन? समाजमा दुई वटा वर्ग छ, र त्यसमा कुन झण्डासित नजिक हुने? वा ओत लाग्ने? सामान्य कुरा हुन्छ कि जसले बढी मन्त्री बनायो, त्यतै लाग्नुहुन्छ? त्यसैले पहिलो पुस्ताका नेता हुँ भन्ने साथीहरुले यो डेढ वर्षयता गरेका क्रियाकलापले के परिणाम दियो? त्यस कसीबाट हेर्नुहुन्छ भने महसुस गर्ने पाटो हो।
एउटा कुराको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्ला, के त्यसोभए कांग्रेसको माओवादीकरण, वा माओवादीको कांग्रेसीकरण भएर जान्छ त गठबन्धन? वा स्वतन्त्र पहिचानसहित जान्छ? वा एमालेबाहेक मिल्न सक्ने वामपन्थी एकातिर मिल्छन्। विकल्प त तीनवटा छ। एमालेसित मिल्न सकेनन्। यो वामपन्थी, कम्युनिस्ट, देशभक्ति र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मेनस्ट्रिम त भयो भयो। यो कांग्रेसभन्दा खुम्चिएर भएको होइन, हरेक चुनावमा कुम झोसेर, सँगै कार्यक्रम गरेर आएको पार्टी हो। यो कुरामा अगाडि छ एमाले।
देशभक्तिको सवालमा कांग्रेस प्रश्नहरूद्वारा घेरिन्छ, एमाले प्रशंसाबाट अघि बढेको छ। यो कुरा नयाँ पुस्ताले पनि फिल गरेको छ। त्यसो हुँदा वामपन्थीहरुका तीनवटा विकल्प छन्। मिल्नसक्ने जति मिलेर जान्छ, एमालेलाई अलग्गै राख। के देखाउनु छ देखाऊ, एमाले रुँदै हिँड्दैन।
बाबुराम त कति वामपन्थी, कति दक्षिणपन्थी के हो, उहाँको वर्षैपिच्छे दल परिवर्तन भइरहन्छ। उहाँहरुले त विचारको पनि संगठनको नेता पनि कांग्रेस मान्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसक्नुभयो। या त कांग्रेसको वामपन्थीकरण वा माओवादीकरण हुनुपर्यो। त्यो सम्भव छैन, मलाई लाग्छ नवउदारवादको नेपालको राजनीतिक प्रतिनिधि हो कांग्रेस। श्रमजीवी वर्गको नेपालको राजनीतिक प्रतिनिधि एमाले नै हो। त्यसमा शंका छैन, विचार र कार्यक्रमकै आधारमा छुट्टिएको छ। उहाँहरु मिल्दा हामीलाई समस्या छैन, परै बस्दिउँला, फेरि पाइन हेरौँला नि हामी। जनताले अनुमोदन गर्ने व्यवस्थामा जनताले जहाँ राख्छन्, त्यहाँ बस्नुपर्यो नि। निर्वाचन अगाडिको फुर्ती चुनाव पछि छ त?
निर्वाचनमा भाग लिँदा कहीँ तेस्रो पनि भइन्छ, कहीँ दोस्रो र पहिलो पनि भइन्छ। व्यक्तिगत रुपमा म जान चाहन्नँ। जसले जित्यो उनलाई बधाई छ। तर, के भन्दा यो नेशनल ट्रेन्ड होइन। यसबाट कतिपय ठाउँमा हौसिएको कुरा पनि म देख्छु। यो स्थानीय चुनाव राष्ट्रपतीय प्रणालीजस्तो हो, यहाँ एउटा व्यक्तिले पनि केही गर्न सक्छ। तर, आम निर्वाचनमा सरकार निर्माणको प्रश्न हुन्छ।
चुनौती होइन, सुन्दरता नै मान्छु म यसलाई। केही न केही कसै न कसैको सन्देश हुन सक्दछ दलहरूका बारेमा पनि। वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरु आफैँ भाग लिने कि आफूलाई राम्रो लागेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने? यो प्रश्न पनि उठ्यो होला राजनीतिक तहमा।
त्यस्तो कुराहरु छन्। कुनै बेला कहीँ काम लागेका पात्र सोही काममा फेरि गर्न खोज्दा अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ। युगको पनि फरक पर्छ। हाम्रो काठमाडौंका उम्मेदवारले हिजो काम नगरेको होइन, बेस्सरी गर्नुभयो। उहाँले त्यो युगमा गर्नुभयो, अहिले नयाँ युग थियो। योसित उहाँको निकटता कम थियो होला। अन्तरक्रिया, घुलमिलको हिसाबले सोचेजस्तो हुन नसकेको होला। अथवा केही अरु कमजोरी रहे होला। त्यसमा म धेरै गहिरिएर जान चाहन्नँ। तर, स्वतन्त्रहरुको कुरा एकाध ठाउँमा हुन सक्दछ, त्यो नेशनल ट्रेन्ड बन्दैन। त्यो नेशनल सोलुसन होइन। व्यक्तिगत रुपमा उठ्न पाउने र जनताले रोज्न पाउने अधिकार त सबैलाई छ नि।
प्रकाशित: June 13, 2022 | 07:26:47 जेठ ३०, २०७९, साेमबार